२४ चैत्र, २०७६ – Mero UK
Day: २४ चैत्र, २०७६
‘युवराज खतिवडालाई सफल बनाउने क्याडर’
२४ चैत्र, २०७६ २४ चैत्र, २०७६ / अनलाइन खबर
२४ चैत, काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ । विसं. २०७३ सालमा डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरिएका अधिकारी राष्ट्र बैंकमा गभर्नरका रुपमा कमब्याक भएका छन् । उनको कमब्याकलाई बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले कसरी हेरेको छ ? हामीले नेपालका क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका …
‘युवराज खतिवडालाई सफल बनाउने क्याडर’ Read More »
भैरहवा प्रयोगशालामा एकैदिन २८ स्वाब संकलन, १० को रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’
२४ चैत, बुटवल । रुपन्देहीको भैरहवामा आइतबार साँझदेखि सञ्चालनमा आएको प्रदेशस्तरीय प्रयोगशालामा सोमबार साँझसम्म २९ जनाको स्वाब संकलन गरिएको छ । कोरोना शंकास्पद २९ जना बिरामीको स्वाब संकलन गरिएकोमा १० जनाको रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’ आएको हो । ‘हिजो (आइतबार) साँझदेखि सञ्चालनमा आएको प्रयोगशालामा आइतबार नै पाल्पाबाट आएको एउटा नमुना परीक्षण भएको थियो । बाँकी २८ वटा नमुना …
भैरहवा प्रयोगशालामा एकैदिन २८ स्वाब संकलन, १० को रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’ Read More »
२४ चैत, काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीलाई नियुक्त गरेको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिले नयाँ गभर्नरका लागि अधिकारीसहित डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी र पूर्वसचिव केशव भट्टराईको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत …
महाप्रसाद अधिकारी बने राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर Read More »
प्रधानमन्त्रीको संश्लेषण : कोरोना रोकथाम ठीकै ढंगले चलेको छ
२४ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अचेल कोरोनाबाट जोगिन ‘सोसियल डिस्ट्यान्सिङ’ का लागि श्वेतपोश टेबलहरु अलि टाढा राखिएका हुन्छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कहिलेकाहीँ कडा रूपमा प्रस्तुत हुने गर्छन् । तर, सोमबारको बैठकमा उनी केही प्रफुल्ल भावमा देखिए । थोरै एजेन्डा भएका कारण सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठक छोटो समयमा सकियो । …
प्रधानमन्त्रीको संश्लेषण : कोरोना रोकथाम ठीकै ढंगले चलेको छ Read More »
२४ चैत, काठमाडौं । सरकारले लकडाउन ८ दिन थप गरेको छ । सोमबार अपराह्न सकिएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बैशाख ३ सम्म लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो । लकडाउनको अवधि दोस्रो पटक थपिएको हो । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को दोस्रो संक्रमित भेटिएपछि सरकारले चैत ११ बाट १८ गते बिहान छ बजेसम्मका लागि लकडाउन घोषणा गरेको थियो । त्यो …
बैशाख ३ सम्म लकडाउन लम्ब्याउने सरकारको निर्णय Read More »
एमसीसी निर्धारित मितिमा सुरु नहुने पक्का !
२४ चैत, काठमाडौं । संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको सिफारिससँगै मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) निर्धारित मितिमा सुरु नहुने निश्चित जस्तै भएको सम्बन्धित अधिकारीहरु बताउँछन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयसँगै एमसीसी कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रयास दोस्रो पटक असफल भएको …
एमसीसी निर्धारित मितिमा सुरु नहुने पक्का ! Read More »